मानिसको उमेर र परिपक्कताका बीच सम्बन्ध कस्तो ?
२०७६ बैशाख १९ गते , विहीवार प्रकाशित
मानिसको उमेर र परिपक्कताका बीच सम्बन्धमानिस कतिबेला परिपक्क हुन्छ या परिपक्कताको सही उमेर कुन हो ? भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्नमा बृटेनका मनोबैज्ञानिकहरुको पछिल्लो ताजा अनुसन्धानले आश्चर्यमा पार्ने मात्रै होइन र गम्भीररुपमा सोच्न पनि बाध्य पार्दछन् । उनीहरुको मान्यता के छ भने हामी मानिसलाई १८ बर्षको उमेरमा भलै बयस्क मानिएको होस् तर हाम्रो मस्तिष्कले ३० बर्षको उमेरसम्म परिपक्कता हासिल गरिरहेको हुन्छ । कतिपय देशको कुरा गर्ने हो भने १८ बर्षको उमेरमा नै गाडीहरु चलाउने अनुमतिपत्र(लाइसेन्स), मतदानको अधिकार, सेनामा भरना हुने अवसर प्राप्त हुने गरेको र एउटा बालिग ब्यक्तिकोरुपमा प्रायः सबै अधिकार प्राप्त हुने गरेका हुन्छन् । जब छोरा या छोरी १८ बर्ष उमेका पुग्दछन् त्यसलाई के मानिन्छ भने अब उनीहरु आफ्नो मजीको मालिक बने ।
तर बृटेनमा चलिरहेको यस सम्बन्धि पछिल्लो अनुसन्धानको परिणामले छुट्टै निष्कर्श निकालेको छ – साबधान ! जरुरी छनै १९ बर्षकै उमेरमा छोरा छोरीहरु परिपक्क भइहालुन् । भलै यो १८ बर्षको उमेर बयस्क चरणको उमेरको रुपमा बैध मानिएको होला तर परिपक्कताको लागि भने अझै प्रतिक्षा गर्नु पर्ने छ । यता हाम्रो पूर्वीय समाजमा परम्परागतरुपमा हेर्ने हो भने प्रजनन क्षमता आर्जन गर्ने बित्तिकै मानिसलाई परिपक्क मान्ने गरिन्छ । तर बिज्ञानले भने पहिला नै के प्रष्ट पारिसकेको छ भने प्रजनन शक्ति या क्षमताको मानिसको मस्तिष्कको परिपक्कतासँग कुनै लिनुदिनु छैन र हुँदैन । परिपक्क हुने मस्तिष्कको आफ्नै गति हुन्छ । यस पूरै बिषयका दुइटा महत्वपूर्ण पक्ष रहेका छन् ।पहिलो पक्ष चिकित्सा बिज्ञानसँग जोडिएको छ भने दोश्रो पक्ष कानुन ब्यवस्थासँग सम्बन्धित छ ।
चिकित्सको दृष्टिबाट हेर्दा मानिसको दिमागको रहस्यहरु अत्यन्तै बिस्तारै बिस्तारै खुल्दै आएका छन् । यो पछिल्लो अनुसन्धानले धेरथोर यही कुरातर्फ संकेत गर्दछ कि पुरोमुखीय र पश्चमस्तिष्कको बिकास बिस्तारै बिस्तारै नै हुन्छ । यो बैज्ञानिक खोल कुन कुरासम्म पुगिसेको छ भने पुरोमुखिय मस्तिष्कमा तत्काल निर्णय लने, सोच्ने, योजना बनाउने, स्थितिको आकलन गर्ने काम हुन्छ । पश्चमस्तिष्ककको बिकास भने परिबेशमा निर्भर रहन्छ । बैज्ञानिकहरु कुन कुरासँग सहमत छभने भने जीवन परिवेश ंयदि अनुकूल हुन्छ या बिवश गरिन्छ भने मस्तिष्क चाँडै पनि परिपक्क हुन्छ । के पनि सम्भब छ भने यदि जीवन परिवेश अनुकूल छैन भने ब्यक्ति बयष्क या उमेर धेरै भएर पनि परिपक्क नहुन सक्तछ । यस चिकित्सकीय अनुसन्धानको एउटा राम्रो शिक्षा या पाठक के पनि हो भने जीबनमा चूनौति, संघर्ष र परिश्रम आबश्यक छ । अनि यस कुरामा कुनै दुइ मत छैन कि संघर्षबाट गुज्रिएका मानिसहरु नै अगाडि बढ्दछ र कुनै कीर्तिमान या प्रतिमान बनाउँदछन् ।
दोश्रो पक्ष कानुन ब्यवस्थाको दृष्टिले हेर्ने हो भने त यो अनुसन्धानले उथल पुथल नै मच्चाइदिन काफी छ । यदि ३० बर्षभन्दा कम उमेरका मानिसले कुनै अपराध गर्दछ भने के उसलाई अपरिपक्क मानेर छोडि दिने हो त ? पश्चिममा अपराध शास्त्रका लागि यो ठूलो प्रश्न बितेका बर्षहरुमा चिन्तनको एउटा प्रमुख बिन्दू बनेर रहेको हो । केही बर्ष अघि बृटेनको हाउस अफ कमन्समा के सिफारिश प्रस्तुत गरिएको थियो भने १८ देखि २५ बर्ष उमेरका अपराधीहरुसँग बेग्लै किसिमले या केही नरम किसिमले प्रस्तुत भएर समस्याको निप्टारा गरिनु पर्दछ । एउटा यस्तै अर्को प्रतिबेदनले पनि के बताएको छ भने धेरैजसो यूवाहरुले २५ बर्षको उमेर पछि अपराध गर्न बन्द गर्दछन् । त्यसैले, के यो कुरा मान्ने हो कि २५ बर्षको उमेरमा मस्तिष्क परिपक्क भइसक्छ ? के त्यतिबेला मनमा लाग्दछ बुझ्न थालिन्छ कि अपराध या बदमासीहरु बन्द हुन्छन् ? पश्चिमा देशहरुमा यो माग पनि हुन थालेलको छ कि ३० बर्षको उमेरसम्मका अपराधीहरुलाई बेग्लै किसिमले हेरिनु पर्दछ । बास्तवमा कुनै यस्तो ठोस नतिजामा पुग्नभन्दा पहिला हामीले मस्तिष्कका नछोइएका कुना कन्दराहरुलाई अझ राम्रो तरीकाले खँगाल्नु पर्दछ । निश्चय नै मस्तिष्कलाई हामीले जत्तिको बढी बुझ्दछौं त्यत्ति नै हामी बढी मानबीय भएर चल्न पनि सक्तछौ भन्ने निष्कर्श निस्कन्छ । यो निकै नै महत्वपूर्ण कुरा छ ।